ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ (ဂျာမနီ) အသင်း: June 2014
သူတစ်ဖက်သား မျက်မာန်ပွားသော် တရားမကွာ ထိန်းစောင့်ကာဖြင့် မေတ္တာနှလုံး ကိုယ်ကသုံးလျှင် အရှုံးဘယ်မှာ ရှိချိမ့်နည်း။
ဆရာတော် ဦးပညာဝံသ (ပီနန်)
•	ဦးသိန်းယု •	ဖုန်း ၀၀၄၉ ၆၉၂၄၀၀၄၇၀၁ •	ဖုန်း ၀၀၄၉ ၁၅၂၀၂၃၂၅၆၃၃ •	ဦးကိုဦး •	ဖုန်း ၀၀၄၉ ၆၉၃၆၇၀၃၇၁၅ •	ဖုန်း ၀၀၄၉ ၁၇၄၈၀၈၄၈၉၀ •	ဦးအောင်ဇေယျ •	ဖုန်း ၀၀၄၉ ၁၅၂၁၇၀၈၄၃၀၀
Buddha Sasana Ramsi e.V
Mainzer Land Strasse-114
Ph: 0049 69 24004701
Email: buddhasasanaramsie.v @ gmail.com
BLZ : 50010060
Konto Nr : 999472605
လုံးစုံများစွာ သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ၊ ဥပါဒ်ရန်ဘေး ကင်းစင်ဝေး ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
သာသနရံသီ၊ ဂျာမဏီ၊ ကမ္ဘာတည်သ၍ မြဲစေမည်။
မဟာဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဒေါက်တာ အရှင်ဥာဏိဿ ရ အထူးတရားပွဲသဘင်
သပိတ်အိုင်ဆရာတော်,သဲကုန်းဆရာတော်...စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် အဓိပတိ,မဟာဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ ,အဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇ ,အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ
ကျေးဇူးတော်ရှင် သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဒေါက်တာ အရှင် ဥာဏိဿသရသည် ဇွန်လ ၁၅ ရက် ၊တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဂျာမနီ နိုင်ငံ ၊ ဖရန့်ဖတ် မြို့ သို့ကြွရောက် ၍ တရားချစ်ခင် ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်ကောင်း အပေါင်းတို့အား နိဗ္ဗာန် ရောက်ကြောင်းတရားချီးမြှင့် ပောာကြား ပေးမည်ဖြစ်ပါ သဖြင့်
တရား၌ပျော်ရွှင် ဓမ္မသူတော်စင်အပေါင်းတို့မှ အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်၍ သောကငြိမ်းအေးအမြိုက်ဆေးတရားတော်များ နာကြားနိုင်ပါစေကြောင်း ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရံသီ သာသနာ့ဒါယကာ,ဒါယိကာမများမှ လေးမြတ်သောစိတ်ထားဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေရာ...........Saalbau Gutleut ခန်းမ, Rottweiler Straße 32, 60327 Frankfurt am Main
Hauptbahnhof မှ Straßebahn 12,16,21 စီးပါ.မှတ်တိုင် Baseler Platz
အချိန် ..........နေ့လည် ၁ နာရီတိတိ (မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲခန့် အရောက်လာကြပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါသည်)
သာယာစေမှု၊ လုံ့လပြုအံ့။ ။
ဒို့ သီတဂူအဓိဋ္ဌာန်မှာ မှာထားတဲ့စကားနှစ်ရပ်ကို အားလုံးစွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်သားပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ကြဘို့လိုတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ”ဘ၀သမိုင်း မရိုင်းစေရန်” ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ မင်းတို့တပည့်တွေအားလုံး သာသနာတော်အတွက် ကံကောင်းလို့လုပ်ခွင့်ရနေတာ၊ အဲ့ဒီလုပ်ခွင့်ရနေ တာကိုက ကံကောင်းလို့ လုပ်ခွင့်ရနေတာ။ ဒီလုပ်ငန်းကို လုပ်ခွင့်ရနေတာကိုက ကံကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးလို့ မှတ်သားပြီးတော့ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေကို အလွဲသုံးစားမလုပ်ဘို့၊ ရထားတဲ့လုပ်ခွင့်ကို ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ပြီးတော့ အခွင့်အရေးကို မိမိရရ အရယူဘို့၊ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့အလုပ်ကို ထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ပဲ အခွင့်အရေးကို ရအောင်မယူတတ်ဘူး၊ မယူနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဘ၀သမိုင်းဟာ ရိုင်းသွားလိမ့်မယ်။
ထိထိရောက်ရောက်မလုပ်တဲ့အပြင် ရထားတဲ့အခွင့်အရေးကို ပျက်စီးအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီသူဟာ ကိုယ့်ဘ၀သမိုင်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အရိုင်းသမိုင်းလို့သိပြီး နောင်တပူပန်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အားလုံး ဘ၀သမိုင်းမှာ မရိုင်းရအောင်၊ သမိုင်းမှတ်တမ်း ကောင်းအောင် သင်သွားဘို့၊ လုပ်သွားဘို့၊ ကျင့်သွားဘို့တိုက်တွန်းတယ်။
ဘ၀သမိုင်းမရိုင်းအောင် ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် ဒို့သာသနာ ဒို့ပြည်ရွာကို သာယာစေမှု လုံ့လပြုရမယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့သာသနာအတွက် ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှကို လုပ်ခွင့်ရသလောက်၊ လုပ်နိုင်သလောက် အကုန်လုံးလုပ်ကြရမယ်။ ငါ့တိုင်းပြည်နဲ့ ငါ့သာသနာအတွက် ငါ ဘာတွေလုပ်နိုင်သလဲ၊ ဘာတွေလုပ်ခွင့်ရသလဲ၊ အဲဒီနှစ်ချက်တွက်ပြီးတော့ အလေးအနက် လုပ်နိုင်သလောက်၊ လုပ်ခွင့်ရသလောက်၊ ထည့်လိုက်ဦး လုပ်ဖြစ်သလောက် အကုန်လုံးလုပ်ရမယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့သာသနာမှာ လုပ်ခွင့်ရပါလျှက်နဲ့၊ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါလျှက်နဲ့၊ လုပ်လို့ဖြစ် ပါလျက်နဲ့ မလုပ်လိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင် သိတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘ၀မှာအသက်ရှည်ရင် ရှည်သလောက် အဲဒီချွတ်ယွင်းမှုတွေနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်ဖျက်ဆီးရာကျတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်ဖျက်ဆီးခြင်းဟာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ ကိုယ့်သာသနာကို ဖျက်ဆီးခြင်းပဲ။ တိုင်းပြည်နဲ့သာသနာကိုဖျက်ဆီးခြင်းဟာလည်း ကိုယ့်ဘ၀ကို ဖျက်ဆီးခြင်းပဲ။ ဘ၀ရယ် တိုင်းပြည်ရယ် သာသနာရယ်ဟာ ခွဲလို့မရဘူး။ ဒီသုံးခုဟာ အတူတူပဲ။
ခုလိုအထက်တန်းရောက်လာတာဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ သာသနာက ကျေးဇူးပြုလို့ပဲ။ သီတဂူဆရာတော်ကကျေးဇူးပြုလို့ဆိုတာထက် သာသနာကကျေးဇူးပြုတာလို့ ဒီလိုတွက်ရမယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့သာသနာက ဒို့ကိုဒီလောက်ကျေးဇူးပြုထားရင် ဒို့ကလည်း ဒို့တိုင်းပြည်နဲ့ ဒို့သာသနာတော်အတွက် ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုရမယ်။ အဲဒီလို သုံးခု ဟန်ချက်ညီသွားရင် ဘ၀သမိုင်းဟာ ကောင်းသွားတာပဲ။ အဲဒါကြောင့် ဘ၀သမိုင်းမရိုင်းကြရအောင်ရယ်၊ တိုင်းပြည်နဲ့သာသနာလှပအောင်ရယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း သမိုင်း မရိုင်းဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀လည်း လှပလာလိမ့်မယ်။ အဲဒီခံယူချက်နဲ့ ရထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကို စနစ်တကျ တိုင်းပြည်နဲ့သာသနာတော်အတွက်ရော မိမိအတွက်ရော အသုံးချ။
သဗ္ဗော လောကော အဿကော-တစ်လောကလုံး ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာ ဘာမှမရှိဘူး။ သဗ္ဗံ ပဟာယ ဂမနီယံ-အကုန်လုံးစွန့်ပစ်ထားပြီး သွားကြရမှာပဲ။ အလွန်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ကလေးအတွင်းမှာ ဒါတွေဟာ အကုန်လုံးပြီးသွားကြပြီ၊ လွန်သွားကြပြီ၊ နောက်ပြန်လှည့်လို့မရဘူး။ အဲဒါကြောင့် အနှစ်သာရနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှာမရတဲ့ ဒိကမ္ဘာမှာ ငါ့တိုင်းပြည်နဲ့ ငါ့သာသနာအတွက် ငါဘာထားပစ်ခဲ့မလဲ၊ ငါ့အတွက်ကော ဘာတွေယူသွားမလဲ၊ အဲဒီစိတ်တွေကို အလေးအနက်ပြုပြီးတော့ ရထားတဲ့အခွင့်အရေး၊ ရထားတဲ့အချိန်၊ ရထားတဲ့ဘ၀နဲ့ခန္ဓာကို တိုင်းပြည် နဲ့သာသနာတော်အတွက် များများကြီးအသုံးချပါလို့ဆိုတာ တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
၂၀၁၂ - ခု အလှူရှင်များ
၂၀၁၁ - ခု အလှူရှင်များ
၂၀၁၂ - ခု အစီအစဉ်
People Online Magazin
စံတော်ချိန်. Powered by Blogger.
Copyright 2011 Buddha Sasanaramsi |